အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: July 2011
Posted by တီချမ်း at 12:31 PM 8 comments: Links to this post
မြစ်ဆုံရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကို “လုံးဝ” ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် မြန်မာ့မြစ်ဆုံ ရေကာတာဆန်းစစ်ချက်က တရုတ်ပြည်ကို တောင်းဆိုခြင်း
တရုတ်ပြည်၊ တရုတ်စွမ်းအင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရေး (CPI) ကော်ပိုရေးရှင်းက ၄င်း အဖွဲ့ ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆန်းစစ်မှုတွေမှ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းမှာ ဆောက်လုပ်နေတဲ့ မြစ်ဆုံ ရေကာ တာ စီမံကိန်းကို ဆောက်လုပ်မှုများ ရပ်ဆိုင်းသင့်ကြောင်း တောင်းဆိုမှုတွေကို လစ်လျှူရှုပြီး အစွမ်းကုန်အောင်မြင်အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
The 945-page “environmental impact assessment,” fully funded by China’s CPI Corporation and conducted byateam of Burmese and Chinese scientists, recommends that the Irrawaddy Myitsone Dam not proceed. “There is no need for suchabig dam to be constructed at the confluence of the Irrawaddy River” says the assessment.
၄င်း စီပီအိုင် ကော်ပိုရေးရှင်း အဖွဲ့ရဲ့ ရာနှုန်းပြည့် ငွေကြေးစိုက်ထုတ်မှု နဲ့ တရုတ်၊ မြန်မာ သိပ္ဗံ ပညာရှင်များက “သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အပေါ် သက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက်” တရပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စာမျက်နာ ၉၄၅ မျက်နှာ ရှိတဲ့ ၄င်း လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက်က ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကို ဆက်လက်ဆောက်လုပ်ခြင်းများ ရပ်တန့် ရန် အကြံပြုထား ပါ တယ်။ “ဧရာဝတီ မြစ်ရဲ့ မြစ်ဆုံမှာ အဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့ ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရန် မလို အပ်ကြောင်း” လဲ ၄င်း လေ့လာဆန်းစစ်မှုက ဆိုပါသေးတယ်။
CPI is planning to build and operate seven mega dams on the Irrawaddy and its tributaries. According to the assessment the dams will impact millions that depend on the river and threaten biodiverse ecosystems: “The fragmentation of the Irrawaddy River byaseries of dams will have serious social and environmental problems not only at upstream of dams but also very far downstream to the coastal area.”
ဧရာဝတီမြစ် နဲ့ ၄င်း ရဲ့ မြစ်လက်တက်တွေမှာ ကြီးမားတဲ့ ရေကာတာကြီး ၇ ခုကို ဆောက်လုပ် မောင်းနှင်ဖို့ စီပီအိုင်က စီစဉ်နေပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များအရကတော့ အဲ့သည် ရေ ကာတာတွေကိုဆောက်လုပ်အသုံးပြုခဲ့ရင် မြစ်ကို မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ သန်းချီတဲ့ လူတွေ အ ပေါ်မှာ သာမက သတ္တဂေဟစနစ်တွေ အပေါ်မှာပါ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
“မြစ်ကို ပိုင်းဖြတ်ပြီး ရေကာတာတွေ အစဉ်လိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် မြစ်အထက်ပိုင်း ရေကာတာဆောက်လုပ်ရာ နေရာများမှာသာမက မြစ်အောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် နဲ့ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတွေမှာပါ ပြင်းထန်တဲ့ လူမှုရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်ပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Last month fighting broke out between the Kachin Independence Organization and the Burma Army near China’s Dapein Dams, also in Burma’s northern Kachin State. An estimated 30,000 people have been displaced.
ပြီးခဲ့တဲ့လက တာပိုင် (Dapein) တရုတ် ရေကာတာအနီး နဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင် ပြည်နယ်မှာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့် ခန့်မှန်းခြေ လူ ၃ သောင်းခန့် နေရာပြောင်းရွေ့ ပေးခဲ့ရပါတယ်။
Mega dams in Kachin State and Burma are deeply unpopular and numerous appeals to Chinese companies and government to stop the dams have gone unanswered. CPI’s own assessment warned, “the majority of local races oppose construction of the dams” and called for consultation with and consent of affected peoples.
မြန်မာပြည်တွင်း နှင့် ကချင်ပြည်နယ်မှာ တည်ဆောက်နေတဲ့ ရေကာတာကြီးများနဲ့ပတ်သက် ပြီး လူအများ မကျေနပ်ချက်များကြောင့် ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ရပ်တန့် ပစ်ဖို့အတွက် တရုတ်ကုမ္ဗဏီ နဲ့ အစိုးရဆီ တောင်းဆိုထားမှုတွေဟာလဲ အခုချိန်ထိ အကြောင်း ပြန်ချက် တစုံတရာ မရရှိသေးဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ စီပီအိုင် ကုမ္ဗဏီ ကိုယ်တိုင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆန်းစစ်ချက်ကလဲ “ဒေသတွင်း မှီတင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားအများစုက ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ခြင်း ကို ဆန့်ကျင်ကြကြောင်း” ဖော်ပြပါရှိပြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေးကြောင့် ထိခိုက် နစ်နာမယ့်သူများရဲ့ သဘောထား နဲ့ ခွင့်ပြုချက်တွေကို ရယူဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။
Although finished in late 2009, the assessment has never been made public.
လေ့လာဆန်းစစ်မှုများအားလုံးဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပေမယ့် စစ်တမ်း ကိုတော့ လူထု နဲ့ အများစု သိအောင် ကြောညာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
“တရုတ်ကုမ္ဗဏီအများစုဟာ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ပိုမိုတိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်လာ ခဲ့ကြပေမယ့် သူတို့ကုမ္ဗဏီရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စံတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးမှု မရှိနေကြသေးပါဘူး” လို့ မြန်မာမြစ်ကြောင်းများ ကွန်ယက် ညှိနှိုင်းရေး အရာရှိ ကိုစိုင်းစိုင်း က ပြောပါတယ်။ စီပီအိုင် ကော်ပိုရေးရှင်းက မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် လေ့လာချက်စစ်တမ်းကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး ရေ ကာတာ ဆောက်လုပ်ရေးတွေကိုလဲ မြန်နှုန်းမြှင့်ပြီး လုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။
The study also recommendsafull social impact assessment be conducted along the length of the whole river but this has not happened.
လေ့လာချက်စစ်တမ်းမှာ နောက်တချက်အနေနဲ့ မြစ်ကြောင်းတလျောက် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအတွက် ပြည့်ပြည့်ဝဝ လေ့လာဖို့ အကြံပြုထားပေမယ့် လုပ်ဆောင် ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
(+ ၆၆) ၈၈၄၁၅၄၃၈၆
လေ့လာချက်စစ်တမ်း အပြည့်အစုံ ကိုဘတ်ရှုရန်အတွက်
မြန်မာပြည်က ဆရာမဂျူး တို့ ဆရာအောင်သင်းတို့ နဲ့အတူတူ အရင်က အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆရာတွေ လုပ်နေကြတဲ့ ပရောဂျက်လေးတွေပါ။ တီက ဘာသာပြန်ပေးတာ ကူပေးတာပါ။ အရင် တီရေးခဲ့ဘူးတဲ့ ဧရာဝတီ ဆိုတဲ့ ကဗျာ မြန်မာလို အင်္ဂလိပ်လို ကိုတောင် သတိရမိသေးတော့တယ်။ နောက်ဆို ကိုယ်တို့ ဧရာဝတီ ကို မေခ မေလိခ ကနေ လာတယ်လို့ ပြောရင် နောက် ဂျင်နရေးရှင်းက ကလေးတွေယုံမှာ မဟုတ်ဘူး။
Posted by တီချမ်း at 4:15 PM3comments: Links to this post
ဘန်ကောက် ကီနိုကုနိယ က ၂၀ ရက်နေ့ကနေစပြီး စာအုပ်တွေ ဈေးချပါတယ် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ ထိ ချမယ် ပြောပါတယ် ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ်က ဈေးစချတဲ့ နေ့ က ရောက်သွားပါတယ် သူငယ်ချင်း နဲ့ ကိုယ် နှစ်ယောက် ပေါင်းပြီး တော်တော်ဝယ်ဖြစ်ပါတယ် တနေ့ က ပိုစ့် ထင်ပြီးပါပြီ နောက်နေ့ ကျတော့ မကျေနပ်သေးတာနဲ့ ထပ်သွားပါသေးတယ် တော်တော်ကို ချတာပါ ကြေငြာထားတာကတော့ အပ်တူ ၇၀% ထိ လို့ ဆိုပါတယ် တကယ်က မကဘူးထင်ပါတယ် ဝတ္ထုတွေဆို ဘတ် ၅၀ ပဲ မြန်မာငွေနဲ့ တွက်ရင်တောင်တန်ပါတယ် မြန်မာစာအုပ်ထက်ကို ဈေးပေါတယ် စာရွက်အသားကောင်းတယ် ကျန်တာကတော့ ပြောစရာမရှိ ဒီလိုမျိုးက ကြုံခဲ့တယ် တနှစ်မှ တခါ ပဲထင်တယ် ကိုယ်ကတော့ ဒီမှာနေတာ ၃ နှစ်ရှိပြီ ထားတော့ အရင်ကလဲ ဝယ်ပါတယ် အရင်က ဘတ် ၃၀၀၀ ဖိုး ဝယ်ရင် ၄ ၅ အုပ်လောက်ပဲ ရတာ ခု က ဘတ် ၃၀၀၀ ဖိုး ဝယ်ရင် အုပ် ၂၀ လောက်ရတယ် ဆိုတော့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲအန်တီချမ်းတို့ နှစ်ရက်ရှိပြီ ရောက်တာ တခါ ကို ၅ နာရီထက်မနည်းပဲ ခြေထောက်တောင့်နေအောင် ရပ်ပြီး ကြည့်တာနော်...သူက တကယ်တော့ ရောင်းမကောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေ ချတာပါ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတွေမပါဘူး ဥပမာ ဟယ်ရီပေါ်တာတို့ တွိုင့်လိုက် တို့ မပါဘူး ဂေါ့ဇစ်ပ်ဂဲလ် လဲ မပါဘူး ကိုယ်လိုချင်တာတွေပြောနေတာ သို့သော် သူက အမျိုးအစားစုံချတယ် တရုတ်စာအုပ်တွေလဲပါတယ် နည်းနည်း ဝယ်ခဲ့တယ် ဆေးစာအုပ် လီဒါးရှပ် ဘီးဇိနက် အို အကုန်အကုန် ကာတွန်းတွေလဲ ချတယ် သူရဲစာအုပ်တွေကော ဝယ်ကောင်းကောင်းနဲ့အသေဝဝယ်တာပဲ နောက်နေ့ ထပ်သွားအုံးမယ်လဲမှန်းပါတယ် ကိုယ်ကလဲ စာအုပ်သရဲလေ.....နင်နဲ့ငါ လယ်ပြင်မှာတွေ့ကြပြီပေါ့ ကီနိုကုနိယ ရယ် ညှင်းညှင်းညှင်း ဆိုပြီး ပါရာဂွမ်ထဲမဝင်ခင် ကိုယ်ပျောက်ဝိဇ္ဇာ ဓါးသမား ပုံစံ နဲ့ ကျူးရင့်ပါသေးတယ် မြင်ယောင်သာကြည့်ကြပေတော့ ပြီးတာနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ကခရက်ဒစ်ကဒ် ကို လက်နက်ပုန်း ထုတ်သလို ရွှတ်ခနဲထုတ်ပြီး သကလာ ဝှစ်ဝှစ်ဝှစ် ဆိုပြီး တက်သွားပါတော့တယ်......
ထားတော့ အဲ့တာနဲ့ ဘလာဘလာဘလာ တွေကိုကျော်လိုက်ရင် အောက်က ပုံတွေရောက်တာပဲ ဒီပိုစ့်တင်ရတဲ့ နောက်ကွယ်က အတွေးအခေါ်က ဒီလိုပါ....ဝယ်လာတဲ့ စာအုပ်တွေကို ကြွား အဲလေ ပိုစ့် တခု အဖြစ် တင်ထားရင် ကောင်းမယ် ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက် ပိုစ့်တင် သေချာ ကြွား အဲလေ စကားက ခဏခဏ မှားတယ် ....သေချာ ပြန်စုထားတဲ့ သဘောပါ
ကြည့်ကြပေတော့ သွားရည်တွေဘာတွေကျတတ်ရင် သွားရည်ခံလေးပါလေး ယူထားကြ ငှဲငှဲငှဲ
ကြွားတာ အဲလေ....ရှယ်တာ အားမရလို့ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် ပီဒီအက်ဖ် နဲ့ မေးလ် ပို့တော့ တယောက်က သတ်ချင်တယ် ပြောပါတယ် မေတ္တာထားကြတယ်လေ ငှဲငှဲငှဲ....
ကဲ ကြိုက်သလောက်သာ သဘောရှိ ဂလောဟိ ကြည့်ကြပေတော့ ....
အော် အရေးကြီးတာ မေ့နေတယ် ပြောဖို့ ဒေါ်ရီတာ ကို အားကျလို့ပါ
“စာအုပ်များ ကို လုံးဝ လုံးဝ လုံးဝ ငှားမည်မဟုတ်ပါ”
သူ့ပိုစ့် ကို ဘတ်ပြီးတော့ အကြံပေါ်တာဆိုတော့ ကိုယ့် အပြစ်မဟုတ် မေတ္တာပို့ချင်ကြရင် အဲ့လို အကြံကောင်းရအောင် ပေးတဲ့ ဒေါ်ရီတာ ကိုသာ ပို့ ကြပေတော့ ........
Posted by တီချမ်း at 1:54 AM 10 comments: Links to this post